DWM.EXE - လုပ်ငန်းစဉ်၏ကြောင်း - ဖိုင် FORMAT - 2019
အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ကို USB-connectors တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစမတ်ဖုန်းဖို့အတော်လေးသင့်လျော်သောမရှိကြပေ။ ဒါပေမဲ့ဒီကကို USB drive ကိုနဲ့ချိတ်ဆက်မရနိုင်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါကဖုန်းအသုံးပြုမှု MicroSD ပေးမအထူးသဖြင့်လာသောအခါများစွာသောအခြေအနေများအတွက်အလွန်အသုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုသဘောတူသည်။ ကျနော်တို့က USB-ချောင်းကိုအားလုံးကိုရွေးချယ်စရာ Micro-USB အများအတွက် connector တွေနဲ့ gadgets ကိုချိတ်ဆက်စဉ်းစားပါရန်သင့်အားပူဇော်လော့။
ပထမဦးစွာသင့်စမတ်ဖုန်း OTG နည်းပညာထောက်ပံ့လျှင်ထွက်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည် micro-USB port ကိုပြင်ပပစ္စည်းတွေအခွင့်တန်ခိုးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စနစ်အတွက်သူတို့ရဲ့မြင်သာသေချာစေရန်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုသို့သောနည်းပညာကို Android 3.1 နှင့်အထက်နှင့်အတူကိရိယာများပေါ်တွင်သဘောပေါက်ခံရဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။
OTG ထောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ရှာဖွေသို့မဟုတ်ပဲအင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထောက်ခံမှု OTG နည်းပညာများအတွက် device ကိုစစျဆေးဖို့ - သေချာစေရန်, အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို USB OTG Checker ကိုလျှောက်လွှာ, download လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကို USB OTG အပေါ် Device ကို OS ကို Check".
OTG Checker ကိုအခမဲ့ Download
စမ်းသပ်မှု OTG အောင်မြင်ထောကျပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ် အကယ်. အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းသင်ပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး adapter ၏အသုံးပြုမှုကို;
USB မှတ် OTG flash drive ကိုအသုံးပြုခြင်း။
အဆိုပါ iPhone အတွက် Lightning-connector ကိုနှင့်အတူအထူး flash drive ကိုသုံးပြီး - iOS အတွက်, တလမ်းတည်းဖြင့်လည်းမရှိ။
စိတ်ဝင်စားစရာအချို့ကိစ္စများတွင်ထိုသို့သောစသည်တို့ကိုမောက်, ကီးဘုတ်, Joystick, ကဲ့သို့သောအခြား devices များ, ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်
Method ကို 1: OTG-cable ကိုအသုံးပြုခြင်း
မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေဖို့ချောင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးအများဆုံးလမ်းမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဝယ်နိုင်သည့်အထူးကေဘယ်လ်, adapter ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ တချို့ကထုတ်လုပ်သူစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet တွေဖြစ်တဲ့ကေဘယ်လ်ကြိုးတစ်ပြည့်စုံတစ်စုံပါဝင်သည်။
တလက် OTG-cable ကိုတွင်အခြားတစ်ဦးစံကို USB-connector ကိုရှိပါတယ် - ထို connector ကို Micro-USB အ။ ဒါဟာဘယ်အရာကိုအဘယ်မှာထည့်သွင်းဖို့ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။
အဆိုပါ flash drive ကိုအယ်လ်အီးဒီရှိပြီးပါကသူတို့ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်, ပါဝါသွား၏။ စမတ်ဖုန်းတွင်လည်းအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်မီဒီယာအကြောင်းအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပေမယ့်မရပါဘူး။
တုတ်ရဲ့ contents လမ်းမှာတွေ့နိုင်ပါသည်
ကိုလည်းကြည့်ပါ: , BIOS က boot flash ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကို
Method ကို 2: adapter ကိုသုံးပါ
မကြာသေးမီကရောင်းချခြင်း Micro-USB အဖို့သေးငယ်တဲ့ adapter (adapter) USB မှတ်ပေါ်လာတော့တယ်။ တဦးတည်းလက်နှင့်အတူဤအသေးစားစက်ကိုအခြားအပေါ်တစ်ဦး Micro-USB အ output ကိုရှိပါတယ် - ကို USB အဆက်အသွယ်အောက်မှာ။ ရုံကို USB drive ကို interface ကိုစ adapter ထည့်သွင်း, သင်မိုဘိုင်းကိရိယာကဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Method ကို 3: OTG-connector ကိုအောကျချောင်းကိုကိုသုံးပါ
သင်မကြာခဏ drive ကိုချိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားလျှင်, အလွယ်ကူဆုံး option ကို - တစ်ဦးကို USB OTG က USB flash drive ကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ USB နဲ့ Micro-USB အထိုသို့သောတစ်ခုသတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုဆိပ်ကမ်းများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့က USB OTG ကို flash drives တွေကိုသမားရိုးကျ drives တွေကိုရောင်းချကြောင်းနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်စျေးနှုန်းမှာသူတို့ပိုပြီးစျေးကြီးမဟုတ်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
Method ကို 4: iPhone အတွက် Stick
အိုင်ဖုန်းများအတွက်အထူးမီဒီယာ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ USB ကသာမန်သူ - ကုမ္ပဏီ Transcend က Lightning connector ကိုသည်တဦးတည်းလက်တွင်, နှင့်အခြားသောအပေါ်တစ်ဦးဖြုတ်တပ်နိုင်တဲ့ drive JetDrive Go ကို 300 တီထွင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒီ iOS ကပေါ်စမတ်ဖုန်းဖို့ချောင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောတကယ်အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းချိတ်ဆက်ကို USB flash drive ကိုမမြင်ရပါဘူးဆိုရင်လုပ်ဖို့
စမတ်ဖုန်းများ FAT32 နှင့်အတူသီးသန့်အလုပ်လုပ်နေကြသောကြောင့်, ပထမဦးစွာအကြောင်းရင်း, သိုလှောင်ရေးကိရိယာဖိုင်စနစ်၏အမျိုးအစားထဲမှာပါလိမ့်မယ်။ ဖြေရှင်းချက်: ဖိုင်ကိုစနစ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦးက USB flash drive ကို format လုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကဘယ်လို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ။
သင်ခန်းစာ: တစ်ဦး low-level format နဲ့ pendrive ဖျော်ဖြေဖို့ကိုဘယ်လို
ဒုတိယအချက်မှာ device ကိုရိုးရှင်းစွာချောင်းကိုများအတွက်လိုအပ်သောအာဏာကိုမပေးနိုငျသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်: အခြား drives တွေကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြတယ်။
တတိယအချက် device ကိုအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက် drive ကို mount မည်မဟုတ်ပါ။ ဖြေရှင်းချက်: StickMount application ကို install လုပ်ပါ။ ထိုအခါအောက်ပါဖြစ်ပျက်:
အဆိုပါချောင်းကိုချိတ်ဆက်အားဖြင့်သင်တို့ကို StickMount run ဖို့သတိပေးခံရနေကြသည်;
အနာဂတျမှာအလိုအလျှောက် run ဖို့ကို tick, ကိုနှိပ်ပါ "အိုကေ";
ကလစ်နှိပ် Now ကို "တောင်ပေါ်က".
သင်အောင်မြင်လျှင်, flash ပါရဲ့ contents လမ်းမှာတွေ့နိုင်ပါသည်
အဖွဲ့ "ဖြုတ်" လုံခြုံစွာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသည်။ StickMount အမြစ်-access ကိုလိုအပ်ပါတယ်သတိပြုပါ။ ဒါဟာ Kingo Root အစီအစဉ်၏အကူအညီဖြင့်ဥပမာ, ရယူနိုင်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌စမတ်ဖုန်းကို USB-ချောင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့စွမ်းရည်ကိုအဆုံးစွန်သောပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာ device ကို OTG နည်းပညာကိုပံ့ပိုးသောလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့သင်က Micro-USB အနှင့်အတူတစ်ဦးက USB flash drive ကိုချိတ်ဆက်ရန်အထူးကေဘယ်လ်သို့မဟုတ် adapter ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အဆိုပါ flash drive ကိုအပေါ်ကိုလြှို့ဝှကျဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်း